Ciidamada ajaanibta ah ee ku sugan Liibiya oo u muuqda kuwa iska indha tiray waqtigii loo qabtay in ay uga baxaan dalka, | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada ajaanibta ah ee ku sugan Liibiya oo u muuqda kuwa iska...
Ciidamada ajaanibta ah ee ku sugan Liibiya oo u muuqda kuwa iska indha tiray waqtigii loo qabtay in ay uga baxaan dalka,
Ciidamada ajaanibta ah ee ku sugan Liibiya ayaa u muuqda kuwa iska indha tiray waqtigii loo qabtay in ay uga baxaan dalka, iyadoo la raacayo heshiiskii xabad joojinta .
Labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalka Liibiya ayaa waxaa ay taageero ka kala helaan quwado shisheeye oo dibadda ka soo kaalmeeyo.
Dowlada uu caalamka aqoonsan yahay ee ka jirta caasimada Tripoli ayaa waxaa in muddo ahba caawinayay militariga dalka Turkiga oo calooshood ushaqeystayaal ka soo daabulay dalka Suuriya, si ay gacan u siiyaan dowladda.
Dhinaca kale, taliyaha saldhigiisu yahay bariga liibiya General Khalifa Xaftar waxaa taageerayay calooshood u shaqeystayaal ka socda dalka Ruushka.
Heshiiskii xabad joojinta ee ay garwadeenka ka ahayd qaramada midoobey ee la saxiixay muddo haatan laga joogo seddex bilood ayaa dhigayay in dhammaan xoogagga shisheeye ay dalkaasi Liibiya isaga baxaan ugu dambeyn shalay oo sabti ahayd.
Balse ilaa iyo hadda wararka ka imaanaya dalkaasi ayaa waxay sheegayaan in aysan jirin astaamo muujinayaya in ay ciidamada shiisheeye ay dalkaasi ka baxayaan .
Dalka Liibiya oo ku hardamayaan dalalka ay ciidamadu ka joogaan haddana waxaa muuqata in wali heshiiska horey looga gaaray ka bixitaanka ciidamadan aan lagu tilmaami karin inuu burburay maadama inta badan dalalka colaaduhu ka jiraan heshiisyada noocaan ah ay muddo jiitamaan.
“Xaaladahaan oo kale dowladaha burburay heshiisyadooda sida loogu tala galay kuma socdaan badi dib u dhac ayaa ku yimaada fadhiya kale ayaa ka dambeeya heshiiyo kale ayaa ka sii dambeyn doono marka laguma tala galin kolba markii la dhahayay sadex bilood ku baxa waxey ahayd un balan la qabtay oo culeys lagu saarayay ciidamada calooshood u shaqeysataasha ah”ayuu yiri Axmed Tiir oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo caalamka Islaamka.
Marxaladaha dagaalka Liibiya
Horaantii bishii Juun ee sanadkii tagay ayaa ciidamadii uu hoggaaminayay Janaraal Khalifa Xaftar waxaa lagu qasbay in ay dib uga gurtaan nawaaxiga magaalada Tripoli, isagoo aad si adag isu difaacay. Wuxuu sidaa ku lumiyay dhul uu ku qabsaday dagaal adag oo muddo sannad ah socday.
Dowladda ay Qaramada Midoobey aqoonsan tahay ee Liibiya waxaa arrintaas ka caawiyay dowladda Turkiga.
Madaweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in xoogagga Khaliifa Xaftar iyo taageerayaashiisa ay caqabad ku yihiin nabadda Liibiya.
Erdogan iyo Ra’isal wasaaraha liibyam, Fayez ayaa 4-tii bishan June shir jaraa’id ku qabtay qasriga madaxweynaha Turkiga ee ku yaalla Ankara, waxayna ka hadleen xaaladda Liibiya iyo sida loo nabadeynayo.
Doorka Ruushka iyo Turkiga ee Liibiya ayaa sanadkii hore aad sare ugu kacay, waxayna ciidamadooda ka kala joogeen qeybo badan oo dalkaas ka mid ah, in kastoo dalal kalena ay kaalin ku lahaayen dagaalkaas.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in dagaalyahanno Suuriya u dhashay ay qeyb weyn ka yihiin dagaalka liibiya kuwaas oo qaarkood halkaas lagu arkay markii Turkiga uu qeyb ka noqday dagaalka dalkaas.
Markii hore, dagaallmayaashaas waxay ka tirsanaayeen dowladda Al-Wefaq, balse waxaa jiro warar sheegaya in Ruushka uu liibya geeyay dagaallamayaal calooshood u shaqeystayaal ah oo Suuriya u dhashay kuwaas oo caawinaya Janaraal Khalifa Xaftar. Balse weli ma cadda kaalinta ay ku leeyihiin dagaalka.
Tani iyo 2015-kii dalka Liibiya wuxuu u qaybsanaa laba dowladood oo bari iyo galbeed ah. Xaftar ayaa fadhiisimo ka dhigtay bariga dalka halka Dowladda Liibiya ka rrimisana ay gacanta ku haysa galbeedka dalkaasi.
Previous articleEtoobiya oo war ka soo saartay Kooxo Daacisho oo Xarumo ka sameystay
Next articleBarakac xalay ka bilaawday Degmada Raaga-ceelle ee gobalka Shabeelada dhexe
Qarax ayaa burburiyay Markab ay leedahay Iraan oo marayay xeebaha Badda Cas ee dalka Yemen, Sidaa waxaa xaqiijisay Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Iran. Markabka wuxuu...